‘मैले कसरी खप्नु यत्रो पी’डा ? मलाई ब’र्बाद पारेर कसलाई खुसी पार्न खोजेका हौं ? – Khabarhouse
‘मैले कसरी खप्नु यत्रो पी’डा ? मलाई ब’र्बाद पारेर कसलाई खुसी पार्न खोजेका हौं ?
Khabar house | २८ माघ २०७६, मंगलवार ०३:२२ | Comments
काठमाडौं : ‘ओ गड,मैले दुई घण्टा लगाएर गरेको प्रार्थनाको के सजाय दियौ?’ सोमबार बिहान मर्निङवाक र पूजापाठ सकेर घर आइपुग्दा श्रीमतीलाई मृ’त फेला पारेपछि भा’वविह्वल भएका पूर्वसचिव अर्जुन कार्की पशुपतिनाथसँग गुनासो गरिरहेका थिए। उनी भन्दै थिए, ‘मैले कसरी यत्रो पी’डा खप्नु ? दु’र्घटना होइन यो, आफ्नै घरमा कसैले मा’रेको छ।
ए भगवान्! मलाई ब’र्बाद पारेर कसलाई खुसी पार्न खोजेका हौं ? म अब पू’जा गर्दिनँ, जुन भगवानले मेरो खुसी लु’ट्यो, त्यो भगवानले के गर्छ र ?’ ललितपुर महानगर पालिका २, सानेपामा छ, पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीको घर । घरमा कार्की सहित उनकी श्रीमती मुना, १० वर्षीय छोरा र घरमा काम गर्न राखिएका २२ वर्षीय विजय चौधरी थिए ।
विजय दाङका हुन् । उनलाई १०/११ वर्षअघि कार्कीले घरमा ल्याएका थिए । सोमबार बिहान कार्कीकै गाडीमा उनका छोरालाई चालकले युलियन्स स्कुल खुमलटार पुर्‍याए । छोरालाई स्कुल छाडेपछि उनले कार्कीले चढ्ने प्रदेश ३–०१–०२२ च ०७०९ नम्बरको गाडी घरमा ल्याएर छाडे र आफ्नो घरतिर लागे । बिहान ८ बजे कार्की सोही गाडीमा पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिन गए ।
उनी मन्दिरबाट फर्किंदा ११ बजेर २० मिनेट गएको थियो । निधारमा टीका र माला लगाएर फर्किएका कार्की जब घर पुगे अनि श्रीमतीलाई बोलाए । कुकुर जोरले भुक्न थाल्यो । कार्की जब घर भित्र पसे, उनले ‘डायनिङ’ टेबुलको छेवैमा झु’न्डिरहेको अवस्थामा विजयलाई देखे । उनी आ’त्तिए । मुनाको खोजी गर्न थाले । खोज्दै जाँदा भान्सामा बे’होस् भएर ल’डिरहेकी थिइन्, मुना ।
भान्सामा पुग्दा उनले जस्तो दृश्य देखे, तत्काल उनलाई सारा जीवन अ’न्धकार लाग्न थाल्यो। उनकी ४९ वर्षीया श्रीमती मुना कार्की रगतको आहालमा डुबेकी थिइन्। उनले केही सोच्नै सकेनन्। उनी त्यहीँ मु’र्छा परेर ढले।१० मिनेटपछि उठेर उनले चि’च्याए, ‘मेरो श्रीमती मा’र्‍यो…!’ कार्की चिच्याएको सुने नजिकै घर भएका यामिन्द्र ओलीले। उनको मनमा चिसो पस्यो।
त्यसपछि प्रहरीलाई खबर पुग्यो । प्रहरी आयो । कार्की भन्छन्, ‘‘सबैले श्रीमती मुनाको ज्यान गइसकेको बताएपछि म पनि आत्तिएँ। रुन थालें । एक घण्टापछि एकजना चिकित्सकले ज्यान तातो छ भनेपछि अस्पताल लग्यौं । तर उनले संसार छाडिन् ।’’ मुनाको शरीरमा र’गत देखिएको र टाउको चो’ट लागेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी टेक राई बताउँछन् ।
विजयले नै घरमा कोही नभएको मौकामा मुनाको ह’त्या गरी आफूले पनि आत्म ह’त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। तर अहिले नै घ’टनाबारे निष्कर्षमा पुग्न नसकिने एसएसपी राईको भनाइ छ। विजय विगत १० वर्षदेखि कार्कीकै घरमा कार्यरत थिए । पत्नीवियोगमा रहेका कार्कीलाई भेट्न सयौं आफन्त घरमा पुग्ने क्रम जारी छ । कार्कीले भने, ‘‘भगवान् रहेनछन् । भगवान् भएको भए त यस्तो व’ज्रपात किन हुन्थ्यो । मेरो सारा संसार उजा’डियो ।